Art is My Life: ချိန်ကိုက်ဗုံးခြောက်လုံးနှင့် အချုပ်ခန်းထဲက နံနက်စာ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 3:40 PM
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ရတာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကပြသွားသလိုပဲ ခံစားလိုက်ရတယ်.
ကိုယ်တွေ့ လေး လာဖတ် သွားပါတယ် ... အဆင်ပြေပါစေ :P
ဟဲ့ဟဲ့ စိုးဇီယ အဲဒါတွေကို အခုလို ပြန်ပြောပြလို့ရော ရလို့လား.
တော်သေးတယ် အဲဒီတုန်းကဒို့ ရန်ကုန်မှာမရှိလို့ ရယ်။ နို့ မို့ ဆိုပါပြီထင်တယ်။ ၄၂လမ်းမှာနေတော့.ဘိုကလေးဈေးနဲ့MGW က three seasons ကိုအဲဒီလမ်းဒေါင့်ကလျှပ်စစ် ဗရိတ်ကာ ပုံးကြီး နားကနေဖြတ်သွားနေကျလေ။
ဒီလိုပို့စ်လေးတွေဖတ်ရတာ သိပ်ကောင်းတယ် ဗဟုသုတရော ရသပါပါတယ် အဲဒီနေ့ရဲ့ မနက်စာအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး နောက်ဘယ်တော့မှ မကြုံတွေ့ရတဲ့ ခေတ်ကိုပဲ မြန်မြန်ရောက်ပါစေလို့နော်
ဘ၀အတွေ့အကြုံလေးကို ခုလိုမျှဝေပေးတာ တူနယ်ဂျင်း အစား ဂုဏ်ယူပါတယ်..
ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်ပါစေ.. :P
အရမ်းကိုကောင်တဲ့ ပိုစ်လေးပါ ကိုစိုးဇေယျ အတွက်ရော ကျမတို့ အတွက်ပါ မဟုသုတရစေတယ်။ ဖတ်ရတာတော့ စိတ်မကောင်စရာကြီးပဲပေါ့။ မနက်စာအတွက်ရော စိတ်မ ကောင်စရာကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အတွေ့ အကြုံ ပြန်ရှယ်ပေးတဲ့အတွက်။